Yuusuf Dabageed oo si jees jees ah ugu jawaabay siyaasiyiinta beesha Xawaadle | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Yuusuf Dabageed oo si jees jees ah ugu jawaabay siyaasiyiinta beesha Xawaadle
Yuusuf Dabageed oo si jees jees ah ugu jawaabay siyaasiyiinta beesha Xawaadle
Muqdisho (Dalkaan.com) – Madaxweyne ku-xigeenka dowlad gobolkeedka HirShabelle, Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa ka hadlay ciidamada ay dowladda federaalka ka dejisay magaalada Beledweyne, kuwaasi oo ay ka dhalatay xiisad xoogan.
Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in ciidamadaas ay dalbadeen ka maamul ahaan si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab, islamarkaana aysan shaqo ku laheyn arrimaha lala xiriirinayo ee boobka doorashada, sida uu hadalka u dhigay.
“Cadow ayaa na qabsaday oo kuwa shalay noo imid (ciidamada) naguma filna ee kuwa kale in na lagu soo daro ayaa u baahanahay oo aan iskaga dhicino cadowga,” ayuu yiri Yuusuf Dabageed.
Sidoo kale waxa uu si adag ugu jawaabay hadalkii xalay kasoo yeeray Siyaasiyiinta beesha Xawaadle ee uu horkacayay Wasiirka arrimaha gudaha, Jeneraal Mukhtaar, kuwaasi oo ka horyimid ciidamada la geeyay Beledweyne.
“Niman siyaasiyiin isku sheegaya oo shalay ka hadlay Muqdisho, sida aan ka warqabana u tagay Ra’iisul Wasaaraha waxay ka hadlayeen ciidanka dowladda Soomaaliya u soo dirtay HirShabelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan caasimadiisa Beledweyne, waxaa nasiib darro ah in aad tiraahdo dad aan metala oo kasoo jeeda, haddana dantaada oo keliya masiirkaaga ku base-gareyso ayaa nasiib darro ah,” ayuu yiri.
Waxa uu ku tilmaamay Siyaasiyiintaas kuwo kuraas raadis ah oo aan marnaba ku hadli karin magaca dadka reer Hiiraan oo dhan, islamarkaana u hadli karin bulshadaas, waxna u qaban karin, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxay kasoo jeedaan qabiilka la yiraahdo Xawaadle, oo waa yahay qabiilada Hiiraan dega laakiin reer Hiiraan oo dhan ma aha. Xawaadle wax siyaasadeed waa taban karaa laakiin waxa siyaasadeed ee tabanaya maxay yihiin ayey yihiin, kuwii shalay talo xumadooda ku lumiyay inay maanta uga sii daraan oo cadowgii oo dilaya dowladda ka bad-baadinaysa ay yiraahdan dowladda wax kale ayay ka shaqeynaysa aad ayey nasiib darro u tahay.”
Waxa uu carabka ku adkeeyay in tabasho kasta oo ka taagan maamulka loo baahan yahay in lala hor fariisto madaxweynaha HirShabelle oo aysan marnaba aqbaleyn in Muqdisho looga soo taliyo.
Ugu dambeyntiina waxa uu Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ugu baaqay in uu tallaabo aad uga fiirsaday uu ka qaato xiisada Beledweyne, oo uusan ku deg-degin go’aan aan la mahdin oo uga sii dara xiisada taagan.
Hadalkan ayaa imanaya kadib markii ay xalay warbaahinta la hadleen Siyaasiyiin ay ka mid yihiin, wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Mukhtaar, Cabdullaahi Goodax Barre, Cabdullahi Sanbaloolshe, xildhibaan Qoone iyo xildhibaan Jindi oo dhamaantood ka soo jeeda gobolka Hiiraan, oo ay si adag uga soo hor jeesteen ciidankii shalay la geeyay magaalada Beledweyne.
Siyaasiyiintaan ayaa Ra’iisul wasaaraha iyo madaxweynaha HirShabeelle Cali Guudlaawe waxay ugu baaqeen inay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan ciidankaas, sidoo kale waxay digniin u direen saraakiil ay ka xuseen taliyaha ciidanka dhulka Jeneraal Biixi oo aad ugu dhaw Farmaajo.
Si kastaba, dhawaan waxaa Beledweyne la filaya inay ka dhacdo doorashada qaar ka mid ah xubnaha golaha shacabka, waxaana xusid mudan in halkaas uu yaalo kursi ay kooxda Farmaajo la rabto Agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin, kaasi oo hadda uu ku fadhiyo xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir.
Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda Sare ee Soomaaliya ayaa go’aan lama filaan ah oo ay qaadatay ku diiday qaadista Dacwadda kiiska kursiga la xayiray...
Deg deg Rooble maka hortagi doonaa Qaraxyada Lala Maagan yahay Musharaxiinta...
Taliyihii saldhigga Qardho oo lagu dilay degmadaasi